Maxkamadda sare ee Somaliland oo ansixisay natiijada - BBC News Somali
Maxkamadda sare ee Somaliland oo ansixisay natiijada
Image caption Maxkamadda sare ee Somaliland
Magaalada Hargeysa ,Fadhi ay yeelatay maanta Maxkamadda sare ee Distooriga ah ee Somaliland ayaa waxay Rasmi ahaan ugu dhawaaqday ansixinta natiijada doorashadii madaxtooyada Somaliland inuu ku guuleystay Madaxweynaha Axmed Siilaanyo iyo Madaxweyne Ku xigeen Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil, ee Xisbiga Kulmiye. Fadhigaasi oo saddexada Xisbi ee tartamay Joogeen iyo Madax kale waxaa kaloo guddoomiyaha Maxkadda Sare Dr; Maxamed Xirsi Oommane kaga dhawaaqay mudada xilka Madaxweynaha iyo madaxweyne xigeenka la doortay inay ka bilaabmeyso shan sano maalinta lagu dhaariyo Xarunta Madaxtooyada ee Hargeysa. Weriyaha BBC-da ee Hargeysa Axmed Saciid Cige ayaa joogay fadhigaasi oo goor dhoweyd warbixintan nooga soo diray.
Maxkamadda, ayaa sheegtay in ay eegeen dhamaan marxaladihii kala duwanaa ee doorashada Somaliland iyo howlihii uu soo qabtay guddiga doorashadu, ayna ku kalsoon yihiin in si sax ah u qabsoomeen wax walba.
Maxkamadda, ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in la doortay madaxda xisbiga Kulmiya, oo Axmed Siilaanyo uu madaxwaynaha la doortay ee dalka yahay. Munaasabadda caleemo-saarka iyo xil wareejinta ayaa maxkamadda sheegtay in ay ka dhici doonto aqalka madaxtooyada ee magaalada Hargeisa.